Chris Christie Mbelata ibu: Gọvanọ NJ kwetara ịwa ahụ afọ nzuzo - Ụwa 2022
Chris Christie Mbelata ibu: Gọvanọ NJ kwetara ịwa ahụ afọ nzuzo
New Jersey's Republican Gov. Chris Christie kwetara na Tuesday ọ gara ịwa ahụ laparoscopic na February ka ọgbọ na-alụ ọgụ na oke ibu - n'agbanyeghị na ọ gọnarịrị mkpali ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ọrụ ahụ.
Akụkọ ahụ mere ka asịrị n'etiti ndị na-enyocha ndọrọ ndọrọ ọchịchị banyere ikike Christie nwere ike ịgba ọsọ maka onye isi ala US na 2016 ka onye ọchịchị na-akwado maka ntuli aka nke ọdịda a, na mgbasa ozi telivishọn obodo na-egosi ndekọ ya nke ịhazi mmefu ego steeti n'ebulighị ụtụ isi. Nsogbu arọ Christie ghọrọ ihe iseokwu na asọmpi gọvanọ 2009, mgbe onye ọchịchị onye kwuo uche ya bụ Jon Corzine gbara mgbasa ozi vidiyo na-adịghị mma nke onye iro ya.
Christie kwuru, "Enweela m nsogbu a n'okwu a ruo afọ 20." "Maka m, nke a bụ gbasara ịgba 50 na ilele ụmụ m anya na ịchọ ịnọnyere ha."
Christie jụrụ ebubo na ndọrọ ndọrọ ọchịchị kpaliri ịwa ahụ ahụ. "Ọ dị nnọọ mkpa karịa nke ahụ," ka o kwuru.
Agbanyeghị, New York Post zoro aka na "ndị na-enye onyinye ndọrọ ndọrọ ọchịchị kachasị elu" bụ ndị hụrụ oge ịwa ahụ ahụ dị ka ihe ịrịba ama doro anya nke ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị Christie. "Nke a pụtara na ọ na-agba ọsọ maka onyeisi oche," ka akwụkwọ akụkọ ahụ gwara Post. "Ọ na-egosi ndị mmadụ na ọ nwere ike ịchịkwa ibu ya. Ọ bụ otu ihe na-egbochi ya."
Na subterfuge kwesịrị ọ bụla Hollywood kpakpando na-achọ plastic ịwa ahụ, Christie gbaa akwụkwọ onye isi nke New York University si Medical Center si arọ management mmemme, Dr. George Fielding, otu dọkịta mere ịwa ahụ na New York Jet's nchịkwa Rex Ryan, onye Christie gbara ajụjụ. Gọvanọ ahụ buru ụzọ gaa ụlọ ọgwụ maka nleta mana ọ rara ya ahụ - usoro mmekpa ahụ pere mpe nke were nkeji iri anọ - n'ụlọ nke ya na Mendham, N.J. na Febụwarị 16.
Christie debere dọkịta dọkịta na-awa ahụ, ọkachamara n'ọrịa bariatric na laparoscopic, n'okpuru aha a na-eche, na-ahọrọ ịwa ahụ nke na-adịghị ahụkebe na-emegide laparotomy, na obere mbepụ - na-emekarị 0,5-1.5 centimeters - nke a na-eme n'ime oghere afọ ya site na iji laparoscope. nke bụ igwefoto vidiyo telescopic nke ejirikwa rụọ ọrụ oghere obi. Christie kwuru na 2006 na ngafe afọ ime ihe na-emetụtakarị bụ "dị oke egwu."
Ọ bụ ezie na gọvanọ jụrụ ikpughe ozi gbasara ibu ya, Post na-akọ na ọ tụpụrụ ihe dị ka kilogram 40 site na etiti ya, nke a kwenyere na ọ dị n'etiti 300 na 350 pound.
Christie kwuru na ịwa ahụ enyerela aka ịkwụsị agụụ ya. "Otu izu ma ọ bụ abụọ gara aga, agara m n'ụlọ steak wee nye iwu steak wee rie ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ n'ime ya, afọ juru m," ka o kwuru.
Ka ọ na-aga n'ihu na-ebelata ibu, ndị dọkịta ga-agbatịkwu "band-band" nke e debere n'afọ ya, nke na-ebelata ike nke onye ọrịa nke iri nri ma na-eweta afọ ojuju nke agụụ.
"Amaara m na ọ na-ada ụda ịsị na ịgba ọsọ maka onyeisi oche dị obere, ma na nnukwu atụmatụ nke ihe, ọ na-ele Mary Pat na ụmụaka anya ma na-aga," M ga-emere ha nke a, ọ bụrụgodị na m agaghị eme ya. nyekwanu onwe m ihe ojoo, "ka o kwuru.
Agbanyeghị, Brian Walsh, onye na-arụ ọrụ mba ofesi nke rụrụ ọrụ n'oge na-adịbeghị anya dị ka onye ntụzi mgbasa ozi maka Kọmitii Mgbasa Ozi National Senatorial, gwara Politco Tuesday na ịwa ahụ wepụrụ ihe mgbochi ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka Christie.
"Nke a bụ mmeri maka Gọvanọ Christie - n'otu aka ahụ, ahụike na ahụike ezinụlọ na-ebute ụzọ n'ihe niile, na nke ọzọ, ọ na-ekwukwa okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ike ma ọ bụrụ na ọ na-achọ ọkwa dị elu."
Na steeti nke nwere oke ochichi onye kwuo uche ya, a na-atụ anya na Christie ga-emeri ntuli aka ọzọ na Nov. 5 mgbe ọ nwetasịrị ndekọ $ 6.2 nde.